Ireo rindranasa efatra tsara indrindra handraisana ny efijery amin'ny Android | Androidsis
Ny smartphone-ntsika dia nanjary ampahany lehibe amin'ny andavan'andro. Amin'izao fotoana izao dia manao asa maro be miaraka amin'ny fitaovantsika izahay. Avy amin'ny fiantsoana, fandefasana hafatra, fizahana Internet na fampiasana karazana lalao sy fampiharana rehetra. Ka, indraindray isika mila na te-ho afaka manoratra ny efijery. Soa ihany, manana fampiharana tsara ho azy isika.
Ao amin'ny Play Store no ahitantsika ny rindranasa handraketana ny efijery amin'ny Android. Amin'izany fomba izany no ahafahantsika mirakitra zavatra ataontsika amin'ilay fitaovana. Safidy tsara raha tsy maintsy mandefa fanazavana momba ny fomba fanaovana hetsika iray amin'ny olona iray hafa isika. Vonona ny hianatra momba ireo rindranasa ireo?
Ny fisafidianana ny rindranasa handraketana ny efijery amin'ny Android no midadasika ankehitriny. Noho izany, nanao a fifantina amin'ny tsara indrindra azontsika sintonina anio. Mora kokoa noho izany ny fikarohana. Inona ireo rindranasa niditra tao amin'ity laharana ity?
1 AZ Recorder Screen
Azo atao ve ny fampiharana an'io karazana fantatry ny mpampiasa Android io. Iray amin'ireo fampiasana be mpampiasa sy azo antoka indrindra koa ankehitriny. Izy io dia fampiharana izay manatanteraka tsara ny iraka ampanaovina azy. Azontsika atao ny manoratra ny efijery tsy misy fetr'andro. Tsy misy mari-drano koa misy fiantraikany amin'ny valiny farany.
Ankoatra izany, ny fampiasana an'ity rindranasa ity dia tena tsotra. Ka safidy tsara ho an'ny mpampiasa rehetra izany. Fampidinana an'ity rindranasa ity handraketana ny efijery amin'ny Android Maimaimpoana. Na izany aza, ao no ahitantsika fiantsenana.
AZ Screen Recorder - Tsy misy faka
Developer: AZ Recorder Screen
Safidy hafa azo antoka fa mahazatra ny ankamaroanao. Izy io dia fampiharana izay miavaka amin'ny fahatsorany amin'ny fotoana fampiasana. Ka io indray dia safidy mety indrindra ho an'ireo mpampiasa izay tsy manana traikefa be loatra na tsy mifanaraka amin'ny fiononana amin'ny findainy. afaka ampiasao ny fakantsary aloha sy aoriana rehefa mandrakitra. Ho fanampin'izany, manana asa fanovana isan-karazany izahay toy ny manampy lahatsoratra, sary na sary.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity handraketana ny efijeryo amin'ny Android. Na dia ao anatiny aza isika dia mahita fividianana sy dokam-barotra.
Fampiharana iray hafa handraketana ny efijery izay mankafy laza malaza. Izy io dia iray amin'ireo fantatry ny mpampiasa Android, efa mihoatra ny iray tapitrisa ny fisintomana ao amin'ny Play Store. Ho fanampin'izay, manana tombana be dia be avy amin'ny mpampiasa sy ny manam-pahaizana izy io. Anisan'ny fahombiazany ny afaka mandray an-tsoratra amin'ny Full HD isika. Ho fanampin'izany, mamela antsika izy io mitahiry horonan-tsary lava ho fahatsiarovana ivelany ary manana fitaovana fanovana maro izahay hahazoana ny valiny tadiavinay.
Fampiharana tsara izay misongadina amin'ny maha-feno azy tanteraka. Fampidinana an'ity rindranasa ity handraketana ny efijery amin'ny Android Maimaimpoana. Na dia toy ny tamin'ny tranga teo aloha aza dia miandry antsika ao anaty ny fividianana sy ny fampandrenesana. Soa ihany fa tsy doka manafika izy ireo.
Anarana iray hafa izay azo antoka fa mahazatra ny ankamaroanao. Izy io koa dia a fampiharana izay misy fisintomana maro ary malaza ao amin'ny Play Store. Ity fampiharana ity dia mamela antsika efijery fandraisam-peo ary miasa ho toy ny tonian-dahatsary. Ka izany dia fampiharana feno sy tsara indrindra ampiasaina. Adika amin'ny fiteny mihoatra ny Fiteny samy hafa faha-2. Ho fanampin'izany, mamela antsika handrakitra an-tsoratra tsy misy fetr'andro amin'ny kalitao tsara.
Izy io dia fampiharana mamela antsika amboary ny lafiny vitsivitsy araka ny itiavantsika azy. Noho izany dia miavaka amin'ny safidy tsara dinihina. Maimaimpoana ny fampidinana app ary ao anatiny dia tsy misy doka na fividianana.
Izany dia ny safidinay amin'ireo rindranasa efatra tsara indrindra handraketana ny efijery amin'ny Android. Ny tsirairay amin'izy ireo dia manome andiany asa fanampiny. Safidy feno tokoa izy rehetra, saingy miankina amin'ny tianao hatao izany, mety misy iray izay mety aminao kokoa. Ahoana ny hevitrao momba ireo rindranasa ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny rindranasa tsara indrindra handraisana ny efijery amin'ny Android
Samsung dia namoaka kinova nohavaozina an'ny Tizen 3.0 hanamboarana ireo olan'ny bateria